Accueil > Gazetin'ny nosy > Komity iraisam-pirenena : Tsy raharahany na hifamono ho faty eto ny Malagasy
Komity iraisam-pirenena : Tsy raharahany na hifamono ho faty eto ny Malagasy
Amin’ny vanim-potoana ny fifidianana toa izao dia miditra an-tsehatra amin’ny rahaharam-pirenena Malagasy ny komity iraisam-pirenena. Ivondronan’ny vazaha na mainty na fotsy mifandray amin’i Madagasikara izany, ary ireo no mibaiko ny Malagasy amin’izao fotoana izao.
Rehefa nametraka ny pôlitika vaovao hitondrana izao tontolo izao ny Firenena Mikambana ny taona 1948 izay nametrahana ny fifanarahan’i Génève mba hialana amin’ny ady sy ny fanjanahan-tany, dia nanapa-kevitra ny firenen-dehibe ka namorona ity rafitra ity izay mahakasika ny zon’olombelona.
Marina fa fikajiana ny fandriam-pahalemana eran-tany no tena antony ary koa hampitoviana zon’ny tany rehetra ho ao anatin’ny lalàna iray sy fifehezana iray. Taorian’io dia nomena fahaleovan-tena avokoa ny firenena voazanaka rehetra izay mbola teo ambany vahohon’ireo firenen-dehibe Frantsay, ny Anglisy, ny Espanôla ary ny Portige. Tao ambadikan’ny Anglisy ny Amerikanina, ary nanao vondrona hafa toa ny Rosianina sy ny Sinoa ka nanao politika hafa manokana izay mitovitovy amin’izany koa.
Ataon’ireo firenena ireo fahirano nefa ny toe-karena eran-tany na dia izany aza, ka lasa niteraka korontana vaovao amin’ny fiaraha-monina iraisam-pirenena indray izany. Ny firenena izay avy nozanahina no isan’ny voa mafy amin’izany satria mbola mikendry ny hifehy ny harena voajanahary amin’ireo firenena ireo ihany ireto komity iraisam-pirenena ireto ary hanjanaka amin’ny endrika vaovao indray.
Dia mbola izany koa no namoronana ny firehana atao hoe “fanatontoloana” ankehitriny mba hifehezana ny tany mahantra sy avy nozanahina sy mba hiveloman’ireo firenen-dehibe izay efa tsy manana akora havadika intsony ka tsy maintsy maka ny any amin’ny firenena mahantra.
Iadian’ny firenen-dehibe maro ankehitriny ny aty amin’ny tany mahantra ka isan’izany i Madagasikara. Gejain’izy ireo ny tontolon’ny toe-karena sy ny harena voajanahary amin’ireo firenena ireo toa ny iainana amin’izao fotoana izao. Ankehitriny dia miady an’i Madagasikara ny Frantsay, ny Amerikanina, ny Rosianina sy ny Sinoa ary ny Vondrona erôpeanina manontolo. Hatramin’i Afrika Atsimo aza dia efa niditra ao anatin’ny sehatra ity koa satria efa mieritreritra fa isan’ny firenena afrikanina efa mandroso.
Amin’izao fotoana izao dia miditra lalina amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena Malagasy ireo kômity iraisam-pirenena ireo. Samy miaro ny tombotsoany avy ka manohana miafina ny kandidà zatsy sy zaroa. Mandrangaranga ny lalàna iraisam-pirenena ary milaza fa hanasazy mafy koa raha toa ka tsy manaraka ny tian’izy ireo hatao. Ny Malagasy koa nangataka vola tamin’izy ireo vao mahavita fifidianana ka avy amin’ny fitenenana hoe “entiny amin’ny sangany tanteraka”. Tsy mahalala raha tsy ny “oui monsieur”. Tsy vitan’izay fa sady mbola mangovitra koa. Natao biby fampatahorana tanteraka ny hoe “izao no tian’ny kômity iraisam-pirenena ka tsy maintsy ekena”. Ny mpitondra Malagasy koa vendrana sy tsy manan-katao intsony ka mandohalika tanteraka eo anatrehan’izy ireo.
Samy miara-mahalala ny Malagasy rehetra fa tsy mandeha amin’ny izy ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara. Efa niaiky izany ny Ceni (Vaomiera mahaleo tena momba ny fifidianana) tamin’ny fihaonany tamin’ireo kandidà ny zoma faha 19 oktobra 2018 lasa teo teny amin’ny foibeny teny Ambatobe ka nilaza fa tsy tomombana izao fikarakarana izao.
Tonga teto ny OIF na ny vondron’ny tany miteny ampahany na tanteraka ny teny frantsay ka nanambara fa azo atao ny fifidianana eto na dia misy hosoka aza satria hono kely izany. Tonga koa ny SADC sy ny Vondrona afrikanina dia milaza fa hanara-maso ny fifidianana hono nefa efa mazava ny tiany holazaina fa hanaiky izay voka-pifidianana eo na marina na diso izany, ary na misy olana na tsy misy.
Tsy miraharaha izay fiainan’ny Malagasy ireto vondrona iraisam-pirenena fa izay tiany hatao ihany no ataony. Tsy olana amin’izy ireo na hifamono ho faty eto ny Malagasy, ary na inona na inona no ho vokatr’izay fifidianana eo. Ho azy ireo dia mila mifidy ny Malagasy ary misy filoha vaovao eo amin’ny taona 2019.
Mampiady firenena maro eran-tany ny fanerena ataon’ny vondrona iraisam-pirenena sy ny kômity iraisam-pirenena ireo amin’ity resaka fifidianana ity. Hita izany amin’ny faritra afrikanina maro, sy any Amerika latina. Io no fototra ny ady ary mahafaty olona marobe amin’ny firenena iray.
Hita taratra arak’izany fa tsy miraharaha izay fiainan’ny Malagasy ny komity iraisam-pirenena na ho lany maty eto ny Malagasy fa tereny hanaraka ny tian’izy ireo hatao fotsiny ihany.
Enga anie ka tsy ho tonga amin’izany ady izany isika Malagasy fa mba hahatsapa tena ireo mpitarika pôlitika amin’izao fotoana izao ka ny tombotsoan’ny vahoaka tanteraka no harovan’izy ireo.